USB Port — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited April 2009 in Other
ဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့ပြသာနာတစ်ခုပါ ဘယ်လိုလဲဲဆိုတော့ usb အရှေ့အပေါက်ကရော အနောက်အပေါက် မရဘူးဗျ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် မရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနည်းလေးတစ်ဆိတ်လောက် ပြတင်းပေါက် ပြန်တင်ရမှာလား မတင်ရဘူးလား ပြန်ပြောကြပါခင်ဗျား.
my computer right click နဲ့ ထဲ၀င် systerm ကနေ ပြီး device manager ထဲ၀င်ကြည့်ပါ usb အလုပ်လုပ်လားမ လုပ်လားကို။ usb drive ကို ပြန် install လုပ်ကြည့် ။ bios မှာတွား ပြီး enable Usb လုပ်ထားလား ကြည့်ပါ။
MotherBoard ရဲ့ Chipset Driver ကို ပြန်သွင်းကြည့်လိုက်ပါလား
gipsy ရေ usb ကို enable ရောလုပ်ထားရဲ့လားကြည့်ကြည့်ပါဦး။
တစ်ချို့က သုံးလို့မရအောင် disable လုပ်ထားကြလို့ပါ။
my computer ကို right click လုပ်
manage ကို click လုပ် ပြီးတော့ device manager ကိုသွားပြီးကြည့်လိုက်ပါ
အဲဒီမှာ usb ကို enable လုပ်ထားမထားလေးလည်းကြည့်ကြည့်ပါဦး
USB ကို CMOS setting မှာ disable လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အဲလိုဆိုရင် device manager မှာကို universal serial bus controller ဆိုတာ ပေါ်မှာကိုမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက gipsy တပ်ကြည့်တာက memory stick လား?
တစ်ခြား usb device လေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါဦးလို့ပြောပါရစေ။
အဲဒါမှမရရင်တော့ USB chipset driver ကို update လုပ်ကြည့်လိုက်ပါလား?
အားလုံးပဲခင်ဗျ mp3 ရော စိုက်လို့ရတဲ့ဟာအကုန်လုံးပေါ့ဗျား ဘာပဲထိုးထိုးမရဘူးဗျ
ကျနော်ဆီမှာတော့ bios ထဲမှာ disable လုပ်ထားတယ်ဗျ။ bios ထဲမှာ လုပ်ထားဖို့များပါတယ်။ ဝင်ဒိုးထဲမှာတော့ တော်တော်တန်တန် ဝင်ပြင်တတ်ပါတယ်။ (Bios က ပတ်ဝတ်စ် ခံထားမလား မသိပါ။:D:D:D)
ကေ့စင်က အပေါက်ကိုရော မားသားဘုတ်နဲ့များ ဂျိုင်းရော ဂျိုင်းရဲ့လား။ အဲဒါလေး တချက်ပြန်ကြည့်ပါဦး။( အင်တာနက်ဆိုင်မှာဆိုရင် ရိုက်ပေါက်နော်။:d:d:d)
ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျား ကျေးဇူးနော် ဖြေပေးကြသော နောင်တော် များကို
software နဲ့ပိတ်ထားတာဆိုရင်တော့ registery ဟက်တဲ့ softwares ကို အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါပေါများများရနိုင်ကြောင်းပါ။
USB Mouse နဲ့ Keyboard ကိုသိပြီး usb stick ကိုမသိတာဆိုရင်တော့ registry ထဲမှာ ပြန်ထားတာ ဖြစ်နိုင်ခြေတော်တော်များပါတယ်။
ဒီမှာသုံးတဲ့ Registry ကဘာကိုပြောတာလဲမသိလို့ ... :105:
Tuneup untitle 2008 တို့မှာလဲ Registry ဆိုတာလေးရှိတယ် စက်ရှင်းတဲ့အခါမှာအဲ software တွေကို Run ပေးရင်ကောင်းတဲ့ Effect ဖြစ်တာတော့သိတယ်ရှင် ။ ဒါပေမဲ့တကယ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲသိချင်ပါတယ် ။
နောက်ပြီး ရှေးခေတ်ပညာရှင် Ko Ko Win ပြောတဲ့ Registry ကို Hack တဲ့ Software က Registry ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဘာလဲ ။ အဲ Registry ကဘယ်လိုနေရာမှာအကျိုးသက်ရောက်နေတာလဲ ရယ် နှင့် Registry ကို ဟက်လုပ်တဲ့ Software ကိုညွှန်ပေးပါရှင် ... ။ :63: :63:
ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေရှင်းပေးပါရှင် ။ ... ။
:77: :77: :77: :77: :77: